Votoatin'ny vavahady: ny vavahady fidirana amin'ny B2B tsara! | Martech Zone
Ny atiny misy vavahady dia paikady ampiasain'ny orinasa B2B maro hanomezana atiny tsara sy misy dikany hahazoana fitarihana tsara ho takalon'ny fifanakalozana. Tsy azo idirana mivantana ny atin'ny vavahady ary afaka mahazo izany ny olona aorian'ny fifanakalozana fampahalalana lehibe sasany.
80% n'ny fananana varotra B2B no miorina amin'ny vavahady; satria ny atiny mifatotra dia stratejika ho an'ireo orinasa mpiorina B2B.
Zava-dehibe ny fahalalana ny maha-zava-dehibe ny atin'ny vavahady raha toa ianao ka orinasa B2B ary ny fananana avo lenta toy izany dia azo antoka fa tsy mihoatra ny resaka fotsiny. Noho izany dia ity misy lahatsoratra natokana ho an'ity fananana sarobidy ity izay manana fahaiza-manao mahomby amin'ny kalitaon'ny taratrafm ho an'ny orinasa B2B.
Maimaimpoana ny atiny misy vavahady ho an'ny fampiharana inbound rehetra; amin'ny fifanakalozam-baovao ihany no anaovana azy. Ny tena antony hanafenana ny atiny dia ny famoronana fitarihana. Rehefa tonga amin'ny tranokala ny mpampiasa iray ary saika hisintona fananana iray; dia ny hangataka amin'ny mpitsidika hameno takelaka iray. Ity takelaka ity dia fampahalalana lehibe ho an'ny mpivarotra hisambotra. Ny firaka izay maniry fatratra ny misintona fananana dia mety ho fitarihana tsara.
Ireto misy tombony mahazatra amin'ny atiny misy vavahady:
Mampitombo ny fahafahanao misambotra fitarihana tsara
Manatsara ny varotra ateraky ny fitarihana
Aleo ianao hahafantatra ny mpanjifanao bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanomezana anao fotoana hahalala bebe kokoa momba ny mpanjifa
Ny atin'ny valiny dia mikasa hanome anao fifehezana tsara kokoa sy fifehezana bebe kokoa amin'ny fahalalana ny mpanjifanao na hahafantarana bebe kokoa momba ireo mpitsidika anao. Ny atin'ny Gated koa dia misy fatiantoka eo aminy toy ny fahazoana tombony SEO kely kokoa, ny mety hisintonana ny fanantenanao hiala ny tranokalanao, tsy misy fahitana marika mazava ho an'ny mpampiasa anao izay mety nanampy azy ireo hahatakatra hoe iza ianao, na manana fomba fijery pejy kely kokoa na na ny fihenan'ny fifamoivoizana aza
Ny atiny mifatotra dia tsy maintsy ampiasaina tsara rehefa manana paikady hafa eo amin'ny toerany ianao ary mety mbola hampidi-doza anao ny famoizana mpitsidika sasany. Na izany aza, afaka manaporofo fa mahasoa ny mitarika tsara, satria misy olona tena te hahalala momba ny marika na mila atiny, ary mila serivisy koa angamba mety hifanakalo hevitra aminao.
Ka inona avy ireo ohatry ny atiny mifatotra izay azonao apetraka amin'ny tranokalanao amin'ny fanantenana hahazoana fitarihana tsara?
Ity misy topy maso vetivety amin'ny sasany amin'ireo endrika tsara indrindra amin'ny atin'ny valiny:
ebooks - Malaza be amin'ireo mpitsidika; ny e-book dia torolàlana izay afaka manome anao fampahalalana tena izy momba ny fahaizana manokana momba ny lohahevitra iray. Izy io dia mety amin'ny endrika torolàlana fohy kokoa izay afaka manampy amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika sy ny fahefan'ny marika; fanaovana azy ho mpifaninana matanjaka ho iray amin'ireo endrika tsara indrindra amin'ny atin'ny vavahady.
Whitepapers - endrika iray malaza amin'ny atin'ny vavahady fidirana- Whitepapers dia endrika tsara amin'ny atin'ny gated. Izy io dia fahaizana manokana momba ny lohahevitra ary afaka manome ny tena fampahalalana tena izy momba ny lohahevitra rehetra nanoratana azy. Malaza ny Whitepapers satria izy ireo dia loharanom-pahalalana ateraky ny atiny tena tsara ary afaka manampy anao hampiorina anao ho mpitarika eritreritra. Ny atiny mifatotra dia mety ho loharanon'ny fitarihana tsara satria mety hahatonga olona maro hatoky anao ary te-hisintona ny fampahalalana fotsy.
webinar - Ny webinar dia ohatra iray hafa amin'ny atiny tsara mifehy. Fandraisana an-tanana lavitra ho an'ireo mpitsidika vonona handray anjara sy hifanerasera aminao. Ireo karazana hetsika ireo dia manampy amin'ny fananganana fifampitokisana sy fifandraisana maharitra. Azonao atao ihany koa ny mikolokolo ireo fitarihana liana ireo na izay misoratra anarana amin'ny webinar. Ity dia endrika atiny misy vavahady izay mety hahasarika fitarihana tsara ihany koa.
Ny tolotra atiny dia tena zava-dehibe mandritra ny dian'ny mpividy. Zava-dehibe ny fananana atiny misy valiny tsara azo alaina ho an'ny fahatsinjovanao amin'ny fananganana fifandraisana sy ny fizotrana fitarihana fitarihana.
Tags: b2b marketingebooksatin'ny vavahadytaratrafmfisoratana anaranaWebinarswhitepapers